Qajeelcha COVID-19 Ammaa - King County
Qajeelcha COVID-19 Ammaa
Dhoorkaa haaraa yeroodhaf King Kaawuntii keessatti
Nutis odeffffannowan fooyya’an kanaa safisaan issin bira gahuuf hojacha jiranulle, turjumanuu fi weebsayitti Kenya irra maxaansuu dhaaf yeroo fudchachu ni malaa. Obsa keessaniif galatoma.
Odeffannon Kenya inni dhiheenya Afaan Ingiliziitiin asitti kingcounty.gov/HealthyWA.
Sadaasa 16, 2020 haarome:
King Kaawuntii kessatti, taatootni haala hamaa olaana haarayyatti olka'e; dabalataan namootni hoospitaala galaan olka'e. Dhiibbaa dabalaa deemu fayyaa hawaasatti, sirna kunuunsa fayyaatti, fi dinaagdee irratti qabu baayyee nuyaachisaa jira. Gaafa Sadaasa 15, Bulchaa Insleen dhoorkaa yeroo isteeta guutuu keessatti hojiirra oolu kan hanga Mudde 14 ti turu beeksise.
Dhoorkawwan haaran kan dalatu:
Mana keessatti namoota isin wajjin hin jiraanne waliin walgayuun dhoorkame, yoo duraan guyyaa 14 if qobaa kaayamtan YKN guyyaa 7 if qobaa kaayamtanii qorannoo COVID hin qabdan jedhu argatan malee.
Walgayiin manaan alaa namoota isin wajjin hin jiraanne 5 oli caaluu hin danda'u.
Manni nyaata fi manni dhuugaatii tajaajiloota mana keessatiif ni chufamu, garuu nyaata fudhatamee demamuufi nyaata mana alatti kan daangaye kennuu ni danda'u.
Qanxaba ykn jimlaa suuqii-keessaa, suuqota meeshaa nyaataa fi tajaajilota dhuunfaa (fkn bakka dabbasaa fi qeensa itti walqixxeeffatan kan dubartii, mana rifeensi dhiiraa itti muratan, kkf.) haga ykn hamma qabachuu dana'u 25% ti dangaye.
Tajaajiloota amantii mana keessaa anga baldhina mana 25% ta'utti ykn namoota 200 kan hincaalle, lamaan keessa kan xiqaa ta'etti dangaye. Farfannaan miseensota mana amantii ykn gartuu faarfatoota hin eeyyamamu, faarfataan qobaa faarfatu ni danda'a. Haguuggini fuulaa yeroo mara ni barbaachisa.
Namni martuu mana akka taa'u jajjabeeffama; dabalataan imala barbaachisoo hin taane gara isteetota ykn biyyoota biraatti dhiisuu.
Waan babaldhachuu dhaabu ni beekna; kanaafi waan amma akka hojjatu beeknu dabalataan gochuuti nurra jira:
Namoota isin wajjin hin jiraanne bira yoo taatan haguuggii uffadhaa (hiriyoota dhiyoof maatiillee yoo ta'an).
Anga danda'ametti mana taa'aa.
Lakkoofsa, baayina namaatif deddeebitii walitti qabamuu daangessaa – keessayyuu kana mana keessaa – afarsuu qileessaa mana keessaa dabalaa.
Akkuma mallatooni tokko isinitti dhagayameen qoramaa ykn yoo naannoo nama COVID-19n qabamee turtan.
Filannoon nagaa qabeessi inni caalan yeroo ayyaana wagga kana namoota mana keessanii ala ta'aniin wal arguu dhabuudha.
Sadaasa 17 – Amajjii 11, 2021
Warraaqiwwan barbaachisoo ta’an irratti dabalatee kan kanaa gadii eeyyamamani:
Isportii nama guddaa fii da’immanii (ala qofatti, haguuggin ni barbaachisa)
Adamsuu fii qurxummii qabuu
Ala buluu (Camping)
Bashaannana manaa alaa nama 5 ykn nama shanii gadii mana kee ala jiraatan
Wal dorgommii: biskileetaa, kaachaa, sigigaachuu cabbiirra, biyya qaxaamuru, wal dorgoommii bidiruu xixiqoon lagaarraa, ispoortii gosa sadiyii, fi waldorgommii ispoortii baayyee
Manneen Bashannana Bishaanii (beellamaan qofa)
Walitti qabamuun mana keessaa namoota isiniin wajjin hin jiraanne wajjiin dhoowwame yoo walitti qabamuun duratti guyyaa 14 f qobaa baatan ykn guyyaa 7 fi qobaa baatanii akkasumas qorannoon akka COVID-19 hin qabne argisiise malee.
Namoota isin wajjin hin jiraanne 5 oli wajjain alatti walitti hin qabaminaa.
Tajaajiloota amantii mana keessaa anga baldhina mana 25% ta’utti ykn namoota 200, lamaan keessaa kan irra xiqqaa ta’e. (Farfattoonni, gartuun muuziqaa fi taatotaa hin eeyyamaman. heddumminnan miseensotni mana amantii faarsuun ykn sirbuun hin hayyamamu)
Tajaajiloonni amantii mana keessatti hundaayan haga nama 5 ti.
Sirni aruuzaa fi awwalchaa namoota 30 ti dangeffame. (Affeerran hin eeyyamamu)
Daawwannaa manaan alaa bakkoota kunuunsa yeroo-dheeraa. (Daawwannaan manaa keessaa namoota gargaarsa barbaachisoo kennaniif haalota kunuunsa gara laaffummaa)
Baraachuunifi tuutni kunuunsa da’immanii ni eeyyamamu (baroomsi dhoorqaarraa alaa ta’urratti hundaaye)
Namni martuu mana akka taa’u jajjabeeffama; dabalataan imala barbaachisoo hin taane kan gara isteetota ykn biyyoota biraa dhiisuu
Namootni isteetota ykn biyyoota biraa irraa dhufan jiraatota Washingtan deebi’an dabalatee erga deebi’anii guyyoota 14 if qobaa of kaayuu qabu.
DHAABATOOTA DALDALAA FII TAJAAJILOOTA
Bakka qurxxummiiwwan itti daw’atan fi bakka bineensi bosonaa kaayamanii daw’ataman (ilaalcha manaa alaa qofa)
Qotiisa ykn qonna
Tajaajiloota mana keessa (daa’ima eeguu, mana qulquleessuu, kkf)
Mana kitaabaa (tajaajila daangawaa mana keessaa)
Gamoo diraamaafi qophiille bashanansiisoo ta’an itti dhiyaatu kan konkoolatan keessa darbamu
Golambaa ykn muuziyeemi ( ilaalcha manaa alaa qofa)
Tajaajila dhuunfaa (bakka dabbasaa fi qeensa itti walqixxeeffatan kan dubartii, mana rifeensi dhiiraa itti muratan, tumaa (tattoo), kkf dangaa baldhina mana keessaa kan qabu)
Bakka bineeyyin manaa itti kunuunfaman
Tajaajiloota Ogeeyyii/dhabatoota biirootti hundaayan (yoo danda’ame fageenyaa hojjachuun ni gaafatama, dhaabatichi dangaa baldhinaa yoo qabaate fi uummataaf banamuu yoo hin dandeenye)
Gurgurtaa manaa (maneen bana dhoowwamaadha)
Manneen nyaaata/dhugaatii (nyaata manaa alaatif fudhatanii deemu qofa)
Qanxaba ykn jimla (suuqii keessatti bittaani ni eeyyamama humna manni qabachuu dandayuun daangaya)